Ngabe iziqu zasekolishi ziyakusiza ukuthi uthole umsebenzi ongcono? | Ukwakheka nezifundo
Ngabe iziqu zasekolishi ziyakusiza ukuthi uthole umsebenzi ongcono?
UMaria Jose Roldan | | IYunivesithi
Njengoba ngangimncane bangitshela ukuthi ukuze ube nekusasa elihle kumele uye enyuvesi uyofunda. Lokho kuyiqiniso, kufanele uye eyunivesithi uyofunda, kodwa futhi ube nekusasa elihle? Okungukuthi, kunabantu abangafundi emanyuvesi futhi abenza izifundo ezihambisanayo noma ukuqeqeshwa ngobungcweti futhi abangaba nemisebenzi emihle.
Kepha-ke, ukuqeqeshwa okwenziwa yunivesithi akunikezwa ukuqeqeshwa kobuchwepheshe, isibonelo. Kuyiqiniso ukuthi uma kukhulunywa ngokuya enyuvesi akukho okuningi ongakhala ngakho, ngaphandle kwezinsuku ezinde zokufunda kanye nezindleko ezibizayo zemfundo yokufunda (eyunivesithi esesidlangalaleni, yangasese noma ekhonsathini izindleko sezivele zikhuphuke kakhulu ).
Kulezi zinsuku, abantu abaningi babheka ukuthi kungenzeka yini ukuya noma ukungayi eyunivesithi ukuze bakwazi ukuqeqesha futhi ngaleyo ndlela bathole umsebenzi abazimisele ngawo. Le yimfihlo Kuzofanele uye eyunivesithi uyofunda uma lokho ozoziqeqesha ngakho ngempela kuyinto oyithandayo. Ngoba uma kungenjalo, iminyaka yaseyunivesithi iyoba yimbi kakhulu empilweni yakho futhi ngokunokwenzeka ekugcineni kwezinga ngeke ukusebenzise lokho okufundile ngoba awukuthandi. Futhi uma uvivinya umzimba, ngeke uhlale isikhathi eside ngoba akukujabulisi… kulokhu iziqu zasekolishi ngeke zikunikeze umsebenzi ongcono, akunjalo?
1 Kusuka ekhaya futhi
2 Ukuba neziqu zasekolishi kubalulekile
3 Akuyona indlela elula
Kusuka ekhaya futhi
Uma ucabanga ukuthi ukuya nokuza enyuvesi kuyinkinga empilweni yakho yamanje nokuthi lokhu kuzokuvimbela ekutholeni iziqu zakho zaseyunivesithi ngabe wenza iphutha elikhulu. Njengamanje unezinketho eziningi zokukwazi ukuba nomsebenzi futhi lokho kungukuthi ungawufunda ukude kusuka ebuntofontofo bendlu yakho futhi ukwazi ukuthola iziqu zakho. Amanyuvesi afana ne-UNED (National Distance Education University) noma i-UOC (i-Open University of Catalonia) ikunikeza ithuba lokuthi ukwazi ukufunda ngaphandle kokuya eyunivesithi nsuku zonke futhi namanani okubhalisa ayafana. Ngakho-ke lokhu ngeke kusaba yisaba sokungatholi iziqu zaseyunivesithi uma kwenzeka ufuna ukuzinikela ekusebenzeni endaweni ethile.
Ukuba neziqu zasekolishi kubalulekile
Ukuba neziqu zaseyunivesithi namuhla kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba ikuvulela iminyango eminingi yokusebenza futhi ungazakhela owakho umhlaba womsebenzi ngokuya ngomkhakha owufundile. Namuhla ukukwazi ukuthola iziqu zaseyunivesithi kubaluleke kakhulu futhi kuwufanele umzamo ukuyithola ngoba ingavula umhlaba womsebenzi obungeke ukwazi ukufinyelela kuwo nganoma iyiphi indlela.
Ngaphezu kwalokho, uma ukwazi ukusebenza kulokho okufundile emsebenzini wakho waseyunivesithi ezweni lethu noma phesheya, umholo wakho wonyaka cishe uphakeme kakhulu kunomuntu osebenza kwezinye izindawo ezingadingi ulwazi nolwazi kuphela. Akufani nokusebenza embonini yezivakashi njengonjiniyela wenkampani yodumo, isibonelo.
Akuyona indlela elula
Kepha iqiniso ukuthi ukuthola iziqu zaseyunivesithi akuyona into elula ngoba ngaphezu komzamo, isikhathi nokuzinikela okuningi, futhi kudinga ukukhishwa kwemali enkulu ukuthi akuwona wonke umuntu okwazi ukuba nakho. Ngisho nabantu abathola iziqu, ezikhathini eziningi kuyadingeka ukufinyelela kwezinye izinketho ezifana neziqu ze-master ukuze bagxile emkhakheni othile, okuthile okucabanga enye imali enkulu yezomnotho (abantu abaningi basala neziqu zaseyunivesithi kuphela ngoba abakwazi ukufinyelela kwi-master degree ngenxa yokwehluleka kwezezimali kanye nokuntuleka kosizo lwezezimali kanye nezinzuzo zabafundi).
Kepha uma ucabanga ukuthola iziqu zakho zokuqala zaseyunivesithi, ezweni lethu ungafaka isicelo semifundaze ehlukene ukuze ukwazi ukwenza izifundo zakho. Ngakho-ke, uma kungenzeka, ungaba nekusasa elingcono ngenxa yeziqu zakho zaseyunivesithi. Kepha enye inketho ukubhalisa ezifundweni ezimbalwa ukuze ukwazi ukukhokha imali ephansi yize kuthatha isikhathi eside ukuthola iziqu zaseyunivesithi.
Ngabe ucabanga ukuthi ukuba neziqu zaseyunivesithi kukuvulela eminye iminyango yomsebenzi nokuthi ungaba nekusasa elingcono? Sitshele umbono wakho ngakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » IYunivesithi » Ngabe iziqu zasekolishi ziyakusiza ukuthi uthole umsebenzi ongcono?
Yini inhloso yezithangami noma umphakathi wabafundi?
U-Eramus yebo, u-Erasmus cha